War Deg Deg ah:Xasan Sheekh iyo Faroole oo isku weeraray shirkii Jaraa’iid ee goor dhaw ka dhacay Garoowe!! | Salaan Media
Home Wararka War Deg Deg ah:Xasan Sheekh iyo Faroole oo isku weeraray shirkii Jaraa’iid...
War Deg Deg ah:Xasan Sheekh iyo Faroole oo isku weeraray shirkii Jaraa’iid ee goor dhaw ka dhacay Garoowe!!
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo Manta booqasho ku tagay magaalada Garoowe iyo madaxweynaha maamulka Puntland C/raxmaan Faroole ayaa goordhow shir jaraa’id ku wada qabtay xarunta cusub ee madaxtooyada Garowe.
Madaxweyne Faroole oo ugu horreyn shirka jaraa’id ka hadlay ayaa ku celceliyey in dawlada Federaalka looga fadhiyo dhaqangelinya nidaamka federaalka iyo in dalka ay ka sameysmaan maamul goboleedyo ay ka mid tahay Puntland iyo kuwa kale ee sameysmi doona.
Faroole wuxuu sheegay in maamulkiisa Puntland aanu gorgortan ka geli doonin hirgelinta nidaamka federaalka ee dastuurka cusub qeexayo, wuxuuna Faroole sheegay in dadka Soomaaliyeed ay qabiil-qabiil u dagaalameen iskuna dhibtoodeen hadda ka dibna xalku uu ku jiro “nidaam federaal” oo ay hoos yimaadaan maamul goboleedyo.
Faroole wuxuu kaloo taageeray habka loo sameynayo maamulka cusub ee Jubbalad ee shirkiisu ka socdo magaalada Kismaayo, wuxuuna dawlada federaalka ugu baaqay in wax isla meel dhigaan dadka ku hawlan shirka Jubbooyinka.
C/raxmaan Faroole ayaa sidoo kale ku dhaliilay dawlada federaalka ee Muqdisho fadhida inaysan dhameystirneyn hay’adeheeda loona baahan yahay inay soo dhameystirato hay’adeheeda dawliga ah.
Xasan Sheekh oo hadlay Madaxweyne Xasan Sheekh oo isaguna shirka jaraa’id ka hadlay ayaa sheegay in dawladisu ay leedahay labo hadaf oo waaweyn kuwaasoo ay dawladu hirgelinso.
1) Madaxweynuhu wuxuu sheegay in dawladu ay ku dadaaleyso inaanu dalku kala go’in oo Soomaaliya ay mid noqoto.
2) Wuxuu kaloo Xasan Sheekh sheegay in nabadgelyada dalka iyo xasilintiisa ay tahay hadafka kale ee dawladiisu leedahay.
Mar uu ka jawaabay hadalka Faroole, wuxuu Xasan Sheekh sheegay in dawladiisu aysan gorgortan gelineyn federaalka, laakiin wuxuu sheegay inay su’aalo badan ka horreeyaan, suda in la is weydiiyo federal nocee ah ayaa la qaadanayaa? iyo sidee loo sameynayaa ama jidkee ayaa loo marayaa hirgelinta federaalka?.
Shirka jaraa’id kadib ayaa waxaa bilawday kulan albaabadu u xiran yihiin oo u dhexeeya wafdiga dawlada federaalka iyo maamulka Puntland. Waxaana dibadda loo saaray saxaafadda iyo shaqaalaha kale ee madaxtyooyada Garoowe oo dhammaantood kulanka dibad joog ka ah.
Madaxweynaha ayaa caawa seexan doona garoowe sida lagu sheegay war ka soo baxay Madaxtooyada Soomaaliy